NANNING TAGRM CO., LTD inyanzvi yekugadzira & kugadzira michina yemanyowa, yakatangira iyo yakavambwa mu1997. TAGRM yakazvipira kune yakazvimisikidza yekutsvagisa komputa yekutsvagisa nekusimudzira mumakore makumi maviri apfuura. Isu takawana matatu ekugadzira patents uye dzinoverengeka dzekushandisa modhi patents. Zvigadzirwa zvinowana iyo CE chitupa, uye kambani yakapasa iyo ISO9001: 2015 system chitupa.
Isu tinoita zvakasarudzika chigadzirwa dhizaini, yakagadzirirwa hunyanzvi masevhisi, inopa mamwe mabasa ehunyanzvi kune vatengi.
M Series inozvisarudzira yega kompositi inotendeuka ndiwo akasarudzika michina yekumesa compostation pasi. Izvo zvinoshandiswa kusanganisa, kupwanya, uye kuwedzera okisijeni yezvinhu zviri mumurwi, pamusoro pezvo, kana macompost Turners akagadzirwa nechetachiona yekumwaya mudziyo, vanogona zvakare kumwaya mabhakitiriya.
Manyowa macomposters michina yakanaka yekushandura marara ezvekurima, tsvina yemhuka, uye marara ehupenyu kuhupamhi hwehutachiona hwehutachiona nekushandisa tekinoroji yazvino.
Nekanaka kuita, mutengo unonzwisisika uye unogadzirisika mushure mekutengesa sevhisi, TAGRM compost Turner yatumirwa kuBrazil, Mexico, Ecuador, Australia, Malaysia, Indonesia, Thailand, Nigeria, Ghana, Zambia, Congo, Tanzania, Russia, Spain, Argentina, Bulgaria, Czech Republic, Uruguay, New Zealand, Paraguay, South Korea, Vietnam, Cambodia, Kenya, Kazakhstan, Kuwait, Saudi Arabia, Namibia nedzimwe nyika dzinopfuura makumi masere nematunhu. Ticharamba tichipa hunyanzvi, zvemhando yepamusoro zvigadzirwa nemasevhisi kune epasi rose organic fetiraiza indasitiri.
Kutarisa pamushini we compost, kusimbisa bere basa, kuburikidza nehutongi hwakakwana mamiriro, hunyanzvi manejimendi mashandiro, kurima musimboti matekinoroji emumvumbi Turner uye kusimudzira kuvandudzwa kwe compost fetiraiza indasitiri, zvakanyanyisa kusimudzira shanduko uye kukwidziridza, iine mhando yepamusoro yekusimudzira!
TAGRM ine chinangwa chekuchengetedza nyika yepasi. Nekubatsira & kukurudzira vanhu pasirese kuti vashandise zvirinyore marara edu, senge matunhu akasimba emaspala, swill uye tsvina yekudya, tsvina yemhuka, nezvimwe, TAGRM iri kuyedza napose painogona kuchengetedza pasi redu.
Nezvinangwa izvi, takawedzera musika wedu nguva dzose mumakwikwi nevamwe vekunze nekune dzimwe nyika, uye takachengeta chinzvimbo chinotungamira mumunda we compost Turner mugadziri uye mugadziri wemuchina wekurima muChina.
Isu tinogara tichitsigira "yakareruka, inoshanda uye yakasimba" dhizaini uye dhizaini yekugadzira, uye tinopa vatengi zvigadzirwa zvakagadzirwa uye nehunyanzvi hwekugadzira zvirongwa.
Kambani inogadzira base inovhara nzvimbo inosvika 13000 mativi emamirimita, iine CNC plasma yekucheka muchina, ndiro yekucheka muchina, komputa yekugadzirisa nzvimbo, CNC lathe, yekugaya muchina uye zvimwe zvigadzirwa.
Dzvanya apa kuti uwane rumwe ruzivo nezve TAGRM garandi izwi